Tsvaga Console: iro gwara rakazara - Gadzirisa SEO yako
Tsvaga Console: iro gwara rakazara - Gadzirisa yako SEO
Zvakanaka, webhusaiti yako inorarama. Iyo dhizaini yakashambidzika, zvemukati zvakagadziridzwa uye uri 100% chokwadi iwe unogona kushandura vashanyi vako kuva tarisiro kana vatengi. Iwe watanga kuvhura traffic traffic yekutsvaga: kushambadzira pamhepo, zvishoma zvemagariro midhiya, uye SEO iri kutanga kubhadhara.
Ehezve, iwe wakanzwisisa kufarira kweSEO (zvakasarudzika mareferensi) kuti ugadzire traffic inokodzera munzira inoenderera Asi unoita sei SEO yako? Mukudzidzisa uku, ndinopa kwauri chishandiso chemahara chinopihwa neGoogle: iyo Inotsvaga Console. Icho chishandiso chinofanirwa kuitwa nekukurumidza sezvinobvira kana saiti yacho yave online.
Mukudzidzisa uku, tichaona:
maitiro ekumisikidza (kuisa) Tsvaga Console
maitiro ekuyera yako SEO kuita, uchishandisa data inongowanikwa muKutsvaga Console
maitiro ekutarisa chaiyo indexing yako saiti
maitiro ekutarisa ese matambudziko anogona kukuvadza SEO yako: nhare, kumhanya, chengetedzo, echirango chirango ...
Tsvaga Console: iro gwara rakazara - Gadzirisa yako SEO January 10th, 2021Tranquillus
VERENGA Uchapupu hwenguva yekuwedzera: mushandi haafanire kuratidza chero mabhureki
pashureNyore Kubatana (tora yako yekutanga mibairo paInternet)
zvinoteveraDzvanyaFunnels Kuti Utange - Yakaderera Budget
Basa repasina basa: kudzoreredzwa kweyechete mwero wemubhadharo unoshanda kune vanhu vanotambura
Dimitri: "Nekuva mugadziri wewebhu, ndakawana mutauro mutsva"